Reny Manala Vanja Milevina: Vehivavy miasa mba hahatonga ilay faritra nifandirana ao Nagorno Karabakh ho toerana azo antoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2018 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Français, Español, Ελληνικά, Italiano, عربي, English
Ity lahatsoratra manaraka ity dia lahatsoratra fiarahanamiasa avy amin'ny Chai-Khana.org, mpiaramiasa amin'ny Global Voices. Lahatsoratra sy sary an'i Knar Babayan.
Avy eny lavitra, toy ny mitovy daholo ireo mpanala vanja – baoty avo, pataloha misy paosy lalina, aroloha, jolotra fiarovana ny maso ary fonon-tànana. Marobe ireo mponina ao Nagorno Karabakh, fiarahamonina somary mpitahiry fombandrazana ihany, no mihevitra hoe lehilahy izy ireny. Saingy vehivavy ireo, ary manao izany izy ireo ho fanampiana ny fiveloman'ny ankohonany, rehefa miroso mankeny anaty faritra misy vanja milevina, toy ny lehilahy ihany.
“Ho an'ny ankohonako no anaovako izao, mba hananan'ny zanako hoavy azo antoka sy tsaratsara kokoa,” hoy ny fanazavan'i Kristine Khachatryan, 38 taona, vehivavy manambady, niteraka zazalahy telo, enina hatramin'ny 18 taona.
Isaky ny mody an-tokantrano i Khachatryan rehefa faran'ny herinandro, manaraka azy eny rehetra eny ilay zanany lahikely enina taona.
Nandritra ny taona maro nifandonany tamin'ny tafika Azerbaijani, tany am-piandohan'ny andiantaona 1990 tany, isantaona dia nisy sivily 20 na mahery teo ho eo no tra-doza avy eny amin'ireo faritra nandevenana vanja sy noho ireo baomba tsy mbola nipoaka voalevina tao Nagorno Karabakh.
Ankehitriny; lazain'ny Halo Trust, fikambanana Britanika miasa amin'ny fanaisorana ireo vanja ary miasa ao Nagorno Karabakh efa ho 18 taona izao, fa efa afaka ny 90 isanjaton'ireo vanja nilevina tao Karabakh, saingy mbola misy ihany ny loza mitatao. Tamin'ity Martsa ity fotsiny, namoizana aina olona telo mpanala vanja ny fipoahana vanja nilevina tao amin'ny faritra Martakert ary nandratra olona roa mponina tao am-bohitra.
Tsy fanapahankevitra mora raisina ny hanao asan'ny mpanala vanja. Saingy telo taona lasa izay, fony nanomboka nampiditra ireo vehivavy voalohany hiasa ho mpanala vanja tao aminy ny Halo Trust, nanapaka hevitra ny hirotsaka i Khachatryan, mpitambolan'ny tanàna avy ao Artashavi, 80 kilaometatra any atsimo atsinanan'i Stepanakert, tanàndehibe ao Karabakh.
Aorian'ny fitliana sy ny fahitany fa tsy misy vanja milevina ao anatin'ny ampahantany voafaritra eo akaikin'ny vohitr'i Karegah, mamaritra ampahany iray vaovao ho esorina vanja i Khachatryan.
“Fitia te-hahafantatra zavatra” no nanaovany an'io — tamin'ny 2013, nandratra olona marobe tamin'ireo mponina tao an-toerana ny fipoahana vanja roa tao akaikin'i Artashavi — fa teo koa ny filàna vola.
Tsy an'asa ny vadin'i Khachatryan, Garik Ohanjanyan, mpampianatra fahiny tany an-tsekoly.
Ny asa maha-mpanala vanja, izay andraisana 225,000 drams (eo amin'ny $464) isambolana ary misy fiantohana, dia nampiakatra efa ho avo efatra heny ny fidirambolany.
”Mazava ho azy, tsy mora ny hoe mpiasa mpanala vanja. Mazava ho azy, fa mampiasa loha ny ankohonako izany,” hoy i Khachatryan. “Miasa saina ihany koa aho ary miezaka manaraka ireo fepetram-piarovana rehetra. Raha arahanao ireo fepetram-piarovana rehetra, dia azonao antoka ny tsy hahavoatohintohina ny ainao. Ny fepetra volamena amin'ny fanaovana asa mampididoza dia ny fiarovana.”
Vantany vao mahazo maripankatoavana, anefa, tsy nihevitra ny hijanona tamin'io asa io ela loatra izy. Nekeny ilay asa satria ilay toerana voalohany nanesorana vanja dia tsy lavitra an'i Artashavi, tsy lavitra ny fianakaviany.
“Mazava loatra, niahiahy aho tany am-piandohana,” hoy izy mahatsiaro, “saingy taty aoriana tsapako fa tsy misy asa ratsy. Ny olona ratsy ihany no misy. Ary amin'izao fotoana izao, ireharehako ny hoe manao asa lehibe sy goavana ho an'ny zanak'olombelona aho.”
Na eny an-kianja aza, mbola vitan'i Khachatryan ihany ny mandoko ny hohony, mitondra ireo ankosotra sy mikarakara ny volony. Tokony hiseho foana ny endrika maha-vehivavy ny vehivavy, tsy olana na inona na inona asa ataony, hoy izy.
Tsy tonga tao an-tsainy velively ny zavamisy hoe izy koa dia vehivavy mpisava làlana tamin'ny fanalàna vanja.
“Talohan'ny naha-mpanala vanja, tsy tonga tao an-tsaiko velively ny hoe asa natao ho an'ny lehilahy io, na ny hoe ahoana aho no hiasa anaty tontolo iray natao ho an'ny lehilahjy,” hoy i Khachatryan manohy.
“Manana zavatra tena hafa tanteraka mihitsy ianao ao an-tsainao rehefa miditra eny amin'ny faritra ho alàna vanja, toy ny zavatra efa fanao andavanandro na ny ankohonanao”, hoy izy manampy.
Miasa anaty tarika telo ireo vehivavy mpanala vanja ao amin'ny Halo Trust, samy misy lehilahy iray avy mitarika azy ireo. “Zavatra efa sainin'ilay fikambanana ny hanofana vehivavy ho mpitarika, na ho mpamily”, hoy i Anna Israelyan, mpandrindra ilay tetikasa.
Tena matetika, miasa any amin'ny faritra lavitra ny tobiny ireo mpanala vanja, mazàna any aminà trano iray hofaina eo amin'ny vohitra na tanàna akaiky eo. Noho io antony io, indraindray izay ampahany kely amin'ny faritra efa afaka ny vanja tao aminy no avadika ho toerana an-kalamanjàna fahandroana sakafo izay ahafahan-dry zareo mihinana sy mitsotsotra. Na andro mangatsiaka, manorana, eo ihany koa ry zareo no manamaina ny fitafiany.
Ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma, eny an-kianja no andanian'izy ireo ny androny. Ny fankanesana any amin'ny toby eo an-toerana, na ny trano iray nofaina tany am-bohitra na tao an-tanàna, dia mety handany fotoana eny amin'ireo làlana mikintaontaona ao Karabakh – maherin'ny ora roa ny fandehanana hitety 65 kilaometatra amin'ny taxi, ohatra. Ny fitaterambahoaka tsy voatery hisy mandrakariva.
Manomboka amin'ny 7 ora maraina ny andro ho an'i Khachatryan isaky ny Alatsinainy. Efa vonona anaty fitafiana fitondra miasa, manamarina haingana ny fitaovana fitondrany manala vanja, dia misotro dite iray kaopy na kafe no sady mizotra hivoaka ny varavarana ihany.
Saika efa afaka avokoa ny vanja tamin'ny ankamaroan'ireo faritra manakaiky ny vohitr'i Karegah, faritra Kashatagh talohan'ny nahatongavan'ny tarik'i Khachatryan teo an-toerana, hita eto amin'ny sary tamin'ny ririnina 2016. Nandritra ny herinandron-dry zareo niasàna teto, nahita vanja iray i Khachtryan. Lazainy fa tsy dia misy inona tsapany manokana rehefa mahita vanja izy; aorian'ny fanakanana azy ireny tsy hipoaka vao tonga ny fihetsehampo.
Mandritra ny tsy maha-eo azy, tsy maintsy mizatra ny fomba fanadiovana ny tokantrano, ny fahandroana sakafo, fanasàna lovia ary ny fampiasàna ny milina fanasàna lamba i rangahy vadiny sy ireo zanany — Gor 18 taona, Tigran 16 taona ary Nairi enina taona.
Ireo vady aman-janak'i Khachatryan no mandray an-tànana ny raharaha an-tokantrano rehefa tsy eo izy mandritry ny herinandro fa any am-panesorana vanja.
Amin'ny taona ho avy, handeha ho any Stepanakert ny zanany lahy lehibe indrindra, Gor, 18 taona, hanao raharaha miaramila mandritra ny roa taona, tiany raha manaraka azy ireo zanany roalahy mbola kely, amin'izay izy ireo mba afaka mifankahita:mifampikarakara sy afaka manao fanatanjahantena bebe kokoa.
Mandritra ny fiatoany tao Karegah, nanao sarivongana mpanala vanja iray i Khachatryan mba ho alaina sary sy halefa any amin'ireo zanany.
Mbola eritreretin-dry zalahy hatrany hoe asa tsy natao ho an'ny vehivavy ny fanesorana vanja milevina, nefa ierharehan-dry zareo ny fananany ny reniny isaky ny mipoitra anaty filazambaovao izy.
Na i Khachatryan izy tenany aza dia manaiky hoe “tsy mahatsiaro mandrakariva ho manana fiainana mirindra aho amin'ny maha-vehivavy, reny ary mpanala vanja ahy.” Tiany ny handamina ny asany mba hananany fotoana bebe kokoa hiarahana amin'ny ankohonany; indrindra fa ilay zanany kely indrindra izay vao telo taona monja fony izy nanomboka ny asa fanalàna vanja milevina.
Na izany aza, mino izy fa “tsy ambaka ny lehilahy ny vehivavy raha resaka asa”.
Mba hanentsenana ny tsy maha-eo azy mandritra ny herinandro, miezaka izy ny mividy sakafo matsiro ho an'ireo zanany rehefa mifarana ny herinandro. Eto, miaraka amin'ny vadiny, Garik, hita eo anaty fitaratra, manafana ovy voaendy izy hatao sakafo antoandro.
Kanefa ho an'ny olona sasany, fambara tokony hiovàny asa ilay fipoahana tamin'ity Martsa ity. Maro ireo namana sy havana no nanomboka niantso an-telefaona sy manontany azy sao tokony hiova asa izy, hoy i Khachatryan.
“Raha tsorina, tsy mahatsiaro tahotra velively aho rehefa miditra eny aminy faritra ho alàna vanja taorian'iny tranga iny,” hoy izy manazava. “Tena nandona ahy mafy tokoa amin'ny maha-olombelona ahy iny ary nahatsapa ho nanana andraikitra goavana be aho hanohy ny asan'ireo namako.”
Mbola mihevitra ny hijanona amin'ny fanohizany ny asany izy.